को-को थिए माघ १९ का डिजाइनर ? | Home
को-को थिए माघ १९ का डिजाइनर ?
Posted on January 18, 2010 by Yonepal	‘शरदचन्द्र शाहले एमाले र कांग्रेस, रमेशनाथ पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पशुपतिभक्त महर्जनले समग्र राजनीति र प्रशासन सम्हाल्ने जिम्मा लिएर माघ १९ को डिजाइन गरेका थिए’
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदम चाल्नुअघि यसको जानकारी अरू तीनजनालाई मात्र थियो　। मौका यही हो, ठोक्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिने तीन हस्ती थिए- शरदचन्द्र शाह, रमेशनाथ पाण्डे र पशुपतिभक्त महर्जन　। तर, स्रोतका अनुसार अहिले यी तीनैजनासँग पूर्वराजाको सम्बन्ध बिगि्रएको छ　।
रिसाएका पूर्वराजालाई मनाउन उनका पूर्वसल्लाहकारले पटक-पटक प्रयत्न गरे पनि असफल भएका छन्　। शाह, पाण्डे र महर्जनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ‘अनुकूल’ भएको भन्दै राजालाई सत्ता हत्याउन ‘उक्साएका’ थिए, तर परिस्थिति सम्हाल्न उचित सल्लाह दिन नसकेको भन्दै ज्ञानेन्द्र रिसाएका हुन्　।
पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापाबाटै ‘भूमिगत गिरोह’को उपाधि पाएका शरदचन्द्र शाहले समेत अहिले ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न पाएका छैनन्　। उनी बहुदलको १५ वर्षपछि ०६१ मा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा पनि राजाका सक्रिय सल्लाहकार थिए　।
राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा सबैभन्दा निकट रहेका शरदचन्द्र शाहले पूर्वराजालाई चार महिनादेखि भेट्न खोजेका छन्, तर सकेका छैनन्　। स्रोतका अनुसार शाहले पूर्वराजालाई भेट्न दरबारका पूर्वसचिवहरू सागर तिमिल्सिना, फणि पाठक र मधु तिमिल्सिनामार्फत पटक-पटक ‘बिन्ती जाहेर’ गरेका छन्　। तर, समय पाउन सकेका छैनन्　।
स्रोतका अनुसार राजाले सत्ता हातमा लिएका वेला परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका डा. रमेशनाथ पाण्डे र पशुपतिभक्त महर्जनलाई पनि पूर्वराजाले भेट दिएका छैनन्　। उनीहरूले गलत सल्लाह दिएकाले आफू फसेको भन्दै ज्ञानेन्द्र रिसाएका छन्　।
मुख्यतः तीन सल्लाहकारको विश्वासमा परेर आफूले माघ १९ को कदम चाले पनि अप्ठ्यारो परेपछि सल्ल्ााहकारहरूले केही गर्न नसकेको र राजसंस्थासमेत विघटन भएको भन्दै ज्ञानेन्द्र रिसाएका हुन्　। ‘त्यसैले उनी माघ १९ को कदममा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा सघाउने सल्लाहकारहरूसँग टाढै बस्न चाहन्छन्,’ स्रोतको दाबी छ　।
त्यति मात्र होइन, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका दुईजना उपाध्यक्ष तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्टलाई पनि पूर्वराजाले भेट्ने समय दिएका छैनन्　। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा परराष्ट्रमन्त्री भएका रमेशनाथ पाण्डेसँग पनि पूर्वराजाको भेटघाट भएको छैन　।
बरु सत्ता हातमा लिनु हुदैन भनेर सल्लाह दिने प्रभाकरशमशेर राणासँग भने पूर्वराजाको सम्बन्ध अहिले बढेको छ　। राजाको प्रत्यक्ष शासनमा भने प्रभाकरका कुरा पूर्वराजाले सुन्दैनथे　। अझ प्रभाकारका छोरा सिद्धार्थ राणा र पारसबीच झगडा भएपछि सम्बन्ध अझै चिसिएको थियो　।
स्रोतका अनुसार माघ १९ को कदमको विषयमा राजा ज्ञानेन्द्रबाहेक शाह, पाण्डे र महर्जनबीच मात्र छलफल भएको थियो　। त्यतिखेर पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन मिलाउने जिम्मा लिएका थिए　।
राजाका दोस्रो सल्लाहकार शरदचन्द्र शाहले राजाले सत्ता हातमा लिएपछि आन्तरिक राजनीति मिलाउने जिम्मा लिएका थिए　। स्रोतका अनुसार शाहले एमाले नेता वामदेव गौतम र केपी ओलीलाई मात्र होइन, सुजाता कोइरालामार्फत गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सम्पर्क गरिसकेको दाबी गर्दै राजालाई अघि बढ्न सुझाब दिएका थिए　।
अर्का सल्लाहकार पशुपतिभक्त महर्जन पूर्वराजाका मुख्यसचिव पनि थिए　। उनले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राजाको पक्षमा भएको भन्दै शक्ति हत्याउन सुझाब दिएको स्रोतको दाबी छ　।
ज्ञानेन्द्रले शक्ति हातमा लिँदा नेपालमा अमेरिकी राजदूत थिए- जेम्स एफ मोरियार्टी　। महर्जनले मोरियार्टीसँग समेत कुरा मिलाउनेमा तत्कालीन राजालाई विश्वस्त बनाएका थिए　।
मोरियार्टीले त्यतिवेला भाषणमा भनेका थिए, ‘घर जलिरहेको छ तर पार्टीहरू मास्टरबेडमा को बस्ने भन्ने होडबाजी गरिरहेका छन्　।’
मोरियार्टी र उनको अमेरिका नेपालका राजनीतिक दलसँग दिक्क भइसके, यही वेला हो ठोक्ने भन्दै सल्लाहकारले ज्ञानेन्द्रलाई शक्ति हत्याउन सुझाब दिएका थिए　। हुन पनि राजाले माघ १९ को कदम चालेकै दिन दिउँसो १२ बजे केही विदेशी राजदूतहरू बेलायती राजदूतको निवासमा बैठक बसे, तर उनीहरूले माघ १९ को कदमलाई न समर्थन गरे न खुलेर विरोध नै　।
तत्कालीन राजाले कदम चालेपछि शरदचन्द्र शाह ‘लाइन मिलाउन’ भारत गएका थिए　। स्रोतका अनुसार उनले भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणीसँग पनि भेट गरे　। ‘तर, शाह आफैंले रक्सी खाएर आडवाणीसँग भेट गरेकाले राजाको कदमबारे राम्ररी डिल गर्न नसकेको रिपोर्ट तत्कालै राजासँग आयो　। तर, त्यो पूर्वराजाले शाहलाई माफ गरे,’ स्रोतले भन्यो　। तर, त्यही दिनदेखि ज्ञानेन्द्र र भारतको सम्बन्ध कहिल्यै राम्रो हुन सकेन　।
त्यसो त शरदचन्द्र शाहकै सिफारिसमा बेंग्लोरबाट डा. तुलसी गिरीलाई झिकाएर उपाध्यक्ष बनाइएको हो　। माघ १९ को कदम चाल्नुभन्दा केही महिनाअघि गिरीलाई सुटुक्क बोलाई राजासँग भेट गराइएको थियो, भेटको कार्यक्रम पनि शाहले नै मिलाएका थिए　।
‘तुलसी गिरीलाई उपाध्यक्ष बनाएपछि म आफैं बद्नाम भएँ,’ स्रोतका अनुसार ज्ञानेन्द्र अहिले भन्दै छन्　।
राजाका मन्त्रीहरूमा टंक ढकाल, भरतबहादुर जिसीलगायतका आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरू श्ााहकै सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए　। तर, ती नियुक्तहरू राजासंस्था जोगाउने र राजालाई लोकपि्रय बनाउनेभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्दि्रत भएको विश्लेषण ज्ञानेन्द्रले गरेको स्रोतको दाबी छ　।
तर, शाह र पाण्डे दुवै आफू राजाको सल्लाहकार नभएको दाबी गर्छन्　। ‘म राजाको सल्लाहकार कहिल्यै भइनँ　। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएको वेला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार थिएँ　। माघ १९ पछि सूचना आयोगको अध्यक्ष मात्र थिएँ　। यो कुरा त मैले रायमाझी आयोगलाई पनि भनेको छु,’ शाहले नयाँ पत्रिकासँग भने　।
राजासँग अहिले तपाईंको भेटघाट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा शाहले भने, ‘राजासँगको मेरो सम्बन्धबारे म मिडियासँग बोल्दिनँ　।’
तर, रमेशनाथ पाण्डेले भने अचेल पूर्वराजासँग आफ्नो भेट नभएको स्विकारे　। ‘-पूर्वराजासँग) आजभोलि भेट हुँदैन,’ उनले दाबी गरे, ‘तर त्यो कदम -माघ १९ को) बारे पनि मलाई थाहा थिएन　।’
तत्कालीन राजाको कदम किन असफल भयो भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘यसको जिम्मा इतिहासलाई छोडौँ　। राजाको शासनकालका मुख्य हर्ताकर्ता पशुपतिभक्त महर्जन भने कहिलेकाहीँ नागार्जुन र निर्मलनिवास जान्छन्　। तर, उनी आफैंले पनि समय पाउन पूर्वराजाका पूर्वसचिव सागर तिमिल्सिना, मधु तिमिल्सिना र फणि पाठकलाई फोन गर्नुपर्छ　। उनीहरूले समय मिलाइदिए मात्र महर्जनले ज्ञानेन्द्रको ‘दर्शनभेट’ पाउँछन्　। तर, पाठक र तिमिल्सिना बन्धुसँग भने पूर्वराजाको अहिले पनि राम्रै सम्बन्ध छ　। सागर तिमिल्सिना त पूर्वराजा भारत जाँदा सँगै थिए　।
यसैगरी पूर्वसैनिकसचिव शान्तकुमार मल्ल, मानार्थ एडिसी भरतकेशर सिंह तथा पूर्वरानी कोमलका दाजु सुरजशमशेर राणा र डिबी राणासँग अहिले पनि पूर्वराजाको नियमित भेटघाट हुने गरेको स्रोतको दाबी छ　। भरतकेशर सिंह त पूर्वराजासँग भेटघाट भइरहेको बताउँछन्　। ‘म सल्लाहकार त होइन, तर नियमित भेटघाट हुन्छ,’ उनले भने　।
यसैगरी राजाको पालामा केशरजंग रायमाझी पनि निकट मानिन्थे　। अहिले पनि नजिकै छन्　। ‘त्यतिखेर मैले राजनीतिक दलहरू र माओवादीसँग वार्ता गर्न सल्लाह दिएको थिएँ, तर अन्य सल्लाहकारहरूले राजालाई गलत सल्लाह दिएर उक्साए,’ उनी भन्छन्　। उनी पूर्वराजासँग कहिलेकाहीँ भेट हुने गरेको बताउँछन्　।
पूर्वराजाका सल्लाहकारहरू को के भन्छन्
तपाईं राजासँगको सम्बन्धको विषयमा मलाई नसोध्नुहोस्　। यो विषयमा म केही बोल्न चाहन्नँ　। राजासँग मेरो केही गुनासो छैन　। र, भन्नु पनि केही छैन　। म राजाको सल्लाहकार होइन　। लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएको वेला (प्रधानमन्त्रीको) सल्लाहकार भएको थिएँ　। म राजाको सल्लाहकार होइन भनेर त रायमाझी आयोगलाई पनि भनिसकेको छु　शरदचन्द्र शाह
राजासँग आजभोलि मेरो भेट भएको छैन　। उनीप्रति मेरो गुनासो छैन　। केही सल्लाह पनि छैन　। राजासँग मेरो सम्बन्ध राजनीति सुरु गरेदेखि नै हो　। तर, माघ १९ को कदमबारे मलाई केही थाहा थिएन　। नयाँ पत्रिका
Filed under: Headlines « अब तीन हजार ३३ वर्षपछि मात्र रेखा किन ‘सेक्सी’ बनिन् ? »